नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : शान्ती र संबिधान भन्दै देश लुट्दै गर्ने, दक्ष युवा जनशक्तिलाई बिदेशमा बेच्ने दल र नेताहरु हो यो समाचार पढ्न सक्छौ तिमीहरु ??
शान्ती र संबिधान भन्दै देश लुट्दै गर्ने, दक्ष युवा जनशक्तिलाई बिदेशमा बेच्ने दल र नेताहरु हो यो समाचार पढ्न सक्छौ तिमीहरु ??
कतारमा विश्वकप फुटवलको पुर्बाधारनिर्माणका क्रममा सन् २०१३ मा १ सय ८५ जनानेपालीको ज्यान गएको छ । बेलायती पत्रिका द गार्जियनका अनुसार सन् २०२२मा हुने विश्वकप फुटबलका लागि भइरहेकोव्यापक पूर्वाधार निर्माणको
क्रममा ज्यानगुमाउनेमा धेरैजसो नेपालका कामदार रहेका छन्। पत्रिकाका अनुसार गत वर्षको जुनदेखि अगस्टसम्मको ३ महिनामा मात्रै ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।अधिकाशले कार्यक्षेत्रमा भएका दुर्घटना तथा हृदयाघातका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
नेपाल कतारमा सबैभन्दा बढी कामदार पठाउने मुलुकको छैठौ स्थानमा पर्छ भने गएको २ वर्षमा त्यहाँ ३ सय ८२जना नेपाली कामदारले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो संख्या अझै बढ्न सक्ने भन्दै पत्रिकामा चिन्ता व्यक्तगरिएको छ ।
गर्मी मौसामा काम गर्दा बिरामी परेका कामदारको उपचारमा समेत हेलचेक्र्याइ भैरहेको साथै क्षतिपूर्तिका लागिपनि कतार सरकारले उचित ध्यान पुर्‍याएको पत्रिकाले जनाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले त्यहाँ ज्यानगुमाएका कामदारको शव फिर्ता गर्न साथै क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरेपनि यसमा फिफाले पनि जोड दिनुपर्नेपत्रिकाले उल्ले गरेको छ ।